Zimbabwe set to outlaw human rights organisations | The BMJ
Zimbabwe set to outlaw...
Zimbabwe set to outlaw human rights organisations
BMJ 2004; 329 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.329.7478.1308-d (Published 02 December 2004) Cite this as: BMJ 2004;329:1308
A new bill, which would criminalise non-governmental organisations working to promote human rights and ban overseas agencies from funding local groups, is set to become law in Zimbabwe before the end of the year.
The bill, which had its final reading last week, is being viewed as a further attempt to silence potential opponents of President Robert Mugabe's ruling Zanu-PF party, ahead of the country's elections in March 2005.
In The Zimbabwe Independent last week, public service and welfare minister Paul Mangwana reportedly denied claims that the bill deliberately targeted specific organisations, describing the idea of a …
White Caroline. Zimbabwe set to outlaw human rights organisations BMJ 2004; 329 :1308
You are going to email the following Zimbabwe set to outlaw human rights organisations